प्यूठानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका तीनवटैमा वाम गठबन्धनको अग्रता – Pahilo Page
शशिधर भण्डारी समृद्ध
प्यूठान । प्यूठान जिल्लाको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका तीनवटै क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले अग्रता लिएका छन् । ३२ हजार १ सय ८२ मत गणना गर्दा प्रतिनिधिसभामा बाम गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार बनेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले १५ हजार ८ सय ४ मत प्राप्त गरी नेपाली कांग्रेसका डा. गोविन्द पोख्रेलभन्दा ३ हजार ४५ मतले अग्रता लिएकी छन् । कांग्रेसका डा. पोख्रेलले १२ हजार ७ सय ५९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी हसिया ताराका माधव सिं केसीले ८ सय ७६, मुठ्ठीका केबी गुरूङले २ सय ६, आँखाका जिएस गुरूङले २ सय ६२, आयातकारभित्रको हलोका खेमराजले ९९ मत र भालेका खेमराज रानाले १४ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि परेका गनिएका मतमध्ये २ हजार ५४ मत बदर भएका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेस सभा १ मा २५ हजार ६ सय ४० मत गणना गर्दा हरि रिजालले १५ हजार २ सय ७५ मत प्राप्त गरी प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेसका टेकप्रसाद भण्डारीभन्दा दोब्बर मतले अग्रता लिएका छन् । भण्डारीले ७ हजार ९ सय ४९ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश सभा २ मा २८ हजार ३ सय ५९ मत गणना हुँदा वाम गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्काले १६ हजार ४ सय ४१ मत प्राप्त गरी दोब्बर मतले अग्रता लिएका छन् । प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका अमर भण्डारीले ८ हजार ६ सय ५१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति : शनिवार, मंसिर २३, २०७४ समय : २३:४६:३५ 360 पटक पढिएको